Yangon Archives - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁ အစိုးရသက် တမ်းသုံးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ဂုဏ်အယူရဆုံး လုပ်ဆောင် မှုမရှိ သေးကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။ ဇူလိုင် ၁ ရက်က မြို့တော်ခန်းမ တွင်ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်စည်ပင် ...
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၃ဝ-လျှပ်စစ်မီတာခကို မသမာသောနည်းဖြင့် လျော့နည်း အောင်မပြုလုပ်နိုင်ရန် ကျောက် တံတားမြို့နယ်တွင် လုပ်ငန်းများ အား အဓိကစစ်ဆေးသွားမည်ဟု သိရသည်။ ကျောက်တံတား မြို့နယ်အ တွင်း လာမည့်အပတ်တွင် စစ် ဆေးရန်စီစဉ်နေပြီး လျှပ်စစ်ဌာနတာဝန်ရှိသူများ၊ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများနှင့် ...
မိုင် ၉၀၀ ကျော် ၀ှီးချဲဖြင့်ခရီးနှင်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သူများ ရန်ကုန်သို့ဆို?
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၈- မိုင်ပေါင်း ၉၀၀ ကျော်ကို ၀ှီးချဲဖြင့်ခရီးနှင်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ ကြသူများသည် ဧပြီ ၈ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ဆိုက်ရောက်လာ ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရည်သန်၍ ကော့ သောင်းမှ ရန်ကုန်သို့ ...
ရန်ကုန်၊ဧပြီ ၈-သက်ငယ်မုဒိမ်း ဆိုင်ရာလက်မှတ်ကောက်ခံအဖွဲ့ များဖောင်းပွနေခြင်းကြောင့် ပြည် သူ့လက်မှတ်သုံးသိန်းရရှိရေးအစီ အစဉ်ကို ခေတ္တရပ်နားထားကြောင်း သိရသည်။ သက်ငယ်မုဒိမ်းသေဒဏ်ပေး ရန်လက်မှတ်ကောက်ခံနေသည့် အချိန်တွင် ကြီးလေးပြစ်ဒဏ်ချ မှတ်ပေးဟူသည့် အဖွဲ့အစည်း များကပါ လက်မှတ်ကောက်ခံလာ ခြင်းကြောင့် ခေတ္တရပ်နားထား ခြင်းဖြစ်ကြောင်း The ...
မန္တလေး၊ အောက်တိုဘာ ၁၂-မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါန်းဇွန်မြို့နယ်အတွင်း အကောင် အထည်ဖော်လျက်ရှိသော စက်မှု ဥယျာဉ်(မြို့သာ)စီမံကိန်းအတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆက် လက်ဖိတ်ခေါ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းကိုအကျိုး တူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။ "စီမံကိန်းတွေရဲ့အားသာချက်၊ ...
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆-ဗဟို ရွှေဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရာတွင် လောင်းကစားဈေးကွက်တစ်ခုကဲ့ သို့ဖြစ်မသွားရန် အထူးဂရုစိုက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်း သိန်းက သတိပေးပြောကြားလိုက် သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်က ရန် ကုန်မြို့ရှိSummit Parkviewဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်သည့် မြန်မာ ...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း နှစ်ရက်ဈေးတွင် အစားအသောက် ရောင်းအားသွက်
မြို့သစ်မြို့တွင်း၌ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းကို ကတ္တရာထပ် ပိုးလွှာခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွ?
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဂိတ်၌ တစ်ခါသုံး ပြည်ဝင်ထွက်ခွင့် ကတ်အဟောင်းများ အစားထိုးပေးခဲ့မှုကြောင